Abantu abahlakaniphile ababala ikhamera ye-IP | LSVISION
Abantu abahlakaniphile ababala ikhamera ye-IP
Le yikhamera ye-IP ebaluleke ngobuhlakani inani labantu, uhlelo lokuqapha umgibeli lokugibela, ukuqapha ukugeleza kwabagibeli bezokuhamba kwabagibeli.
Bala inani labantu abangenayo, ukushiya, ukuhlala futhi kutholakale.
Ingasetshenziswa ezindaweni lapho ukugeleza kwabantu kukhawulelwe, njengezindawo ezinhle kakhulu nezitolo ezinkulu zezitolo.
LS-PC100 EN.pdf Landa
LS-PC101 EN.pdf Landa
Model No: Ls-PC100
1, Sekela ukubona komuntu, isikhathi sangempela sokubala ukungena / ukuphuma / hlala abantu ubungako.
2, Support Setha ukuphepha ngabantu ubungako, ikhamera izokwelakala lapho igcwele kakhulu.
I-3, ikhamera ye-Starlight
I-4, eyakhelwe ngaphakathi ye-auto access motor lens, kulula ukuguqula isithombe sevidiyo.
I-5, eyakhelwe ngaphakathi ye-infrared infrared, ukusetshenziswa okuphansi, auto ukushintsha umbala&B / W Model.
Izinombolo zokubonisa zesikhathi sangempela
Izibalo zesikhathi sangempela senani labantu abangena nokushiya / ukuhlala;
I-auto ezenzakalelayo lapho inani labantu lidlula umkhawulo
Lapho izinombolo zomuntu ezikhona zingu-0, uhlelo luzokwenza i-alamu ezenzakalelayo
Icala lokungena lesitolo sokungena
Bala futhi ukhawulele inani labantu abangena
Amacala okufaka okufakiwe amaningi
Amakhamera afakwe ezindaweni ezahlukahlukene, futhi ikhompyutha iphethwe ngendlela ehlanganisiwe ukubala nokunciphisa umkhawulo inani labantu abangenayo.
I-LS Vision 1080P Starlight Outdoor Ihlanganisiwe 3G 4G LTE SIM Card WiFi Solar Power Deless DOME LARELELELE Speed ​​PTZ IP IP Camera